Nyocha akụkọ njem njem
Akwụkwọ njem njem 3 kacha mma
Isi mmalite nke akwụkwọ na-adabere n'ụdị egwuregwu. Ndị a ghọtara taa dị ka ọrụ kachasị ukwuu nke akwụkwọ akụkọ ụwa na-eme ka anyị gaa njem n'ime otu puku ihe egwu na nchọpụta ndị a na-atụghị anya ya. Site na Ulysses ruo Dante ma ọ bụ Don Quixote. Ma taa ụdị njem njem ...
3 akwụkwọ Clive Cussler kacha mma
Ọ bụrụ na enwere onye edemede na -eme njem ugbu a nke ka nwere ụdị egwuregwu n'ime ndị na -ere ahịa, ọ bụ Clive Cussler. Dị ka Jules Verne ọgbara ọhụrụ, onye ode akwụkwọ a duuru anyị gaa na atụmatụ na -adọrọ mmasị na njem na ihe omimi dị ka ọkpụkpụ azụ. Eziokwu …
Akwụkwọ 3 kacha mma nke Alberto Vázquez Figueroa dere
Maka m, Alberto Vázquez-Figueroa bụ otu n'ime ndị ode akwụkwọ mgbanwe ahụ, n'echiche nke m na-agụ ya nke ọma dị ka nnukwu onye edemede nke ihe omume ngwa ngwa, mgbe m ka dị obere. Alọghachikwutela m ya n'oge na-adịbeghị anya maka akwụkwọ ọhụrụ ya bụ Goodbye Mister Trump, nke m kwadoro na…
Nnukwu ọdachi na -acha odo odo, nke JJ Benítez dere
Ole na ole ndị edemede n'ụwa na -arụ ọrụ ide oghere anwansi dịka JJ Benítez na -eme. Ebe onye edemede na ndị na -agụ akwụkwọ bi ebe eziokwu na akụkọ ifo na -ekerịta ọnụ ụlọ nwere ike ịnweta nke nwere igodo nke akwụkwọ ọhụrụ ọ bụla. N'etiti anwansi na ịre ahịa, n'etiti ndị na -enweghị nghọta na ...
Asụsụ zoro ezo nke akwụkwọ, nke Alfonso del Río dere
Echetere m Ruiz Zafón. Ọ na -eme m oge ọ bụla m chọtara akwụkwọ akụkọ na -arụtụ aka na akụkụ nke akwụkwọ, n'asụsụ zoro ezo, na -esi ísì ụtọ amamihe gbakọtara na shelf adịghị agwụ agwụ, ikekwe n'ụlọ ili akwụkwọ ọhụrụ… Nnukwu echiche nke onye edemede Catalan ...
Mengele Zoo nke Gert Nygardshaug dere
Ọ na -abụ oge dị mma ịmụta ụfọdụ ịmata ihe dị ka "Mengele Zoo", ahịrịokwu e mere na Portuguese Portuguese nke na -arụtụ aka n'ọgba aghara nke ihe ọ bụla, yana nkọwa ọjọọ nke dọkịta na -eme ara nke mechiri ụbọchị ya na ezumike nka kpọmkwem na Brazil. N'etiti ọchị ojii na echiche ọjọọ nke ...
Vozdevieja, nke Elisa Victoria dere
Kedu onye na -echetaghị Manolito Gafotas nke Elvira Lindo? Ọ bụghị na ọ bụ ihe metụtara cyclically na -ewu ewu banyere ndị na -akwado ụmụaka na akwụkwọ akụkọ maka ndị niile na -ege ntị. Ọ bụ ajụjụ nke ma n'oge Elvira na Ugbu a Elisa, na ịdị nso ya ...
N'ebe dị anya, nke Hernán Díaz dere
Ọ na -adị mma mgbe niile izute ndị edemede nwere obi ike, nwee ike ibute ọrụ nke ịkọ akụkọ dị iche iche, karịa aha mbanye anataghị ikike dị ka "akpaghasị" ma ọ bụ "ihe ọhụrụ." Hernán Díaz na -ewetara akwụkwọ akụkọ a ịdị adị a na -apụghị ịgbagha agbagha nke onye na -ede ihe naanị maka ya, n'ebumnuche mmebi iwu n'ụdị na ụdị, na -atụgharị ...
Oliver Twist, nke Charles Dickens dere
Charles Dickens bụ otu n'ime akwụkwọ akụkọ Bekee kacha mma n'oge niile. Ọ bụ n'oge ndị Victoria (1837 - 1901), oge nke Dickens biri ma dee, ka akwụkwọ akụkọ ahụ ghọrọ isi edemede. Dickens bụ onye nkuzi pụrụ iche nke nkatọ mmekọrịta, na ...